AmaDatshi ayayazi imeko abayiyo: i-Stanford entolongweni yokulinga: uMartin Vrijland
AmaDatshi ayengazi imeko abayiyo: ukuhlolwa kwejele laseStanford
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	24 Juni 2019	• 5 Comments
Kwi-1971, uFilipu Zimbardo wenza ijele entolongweni yeSyunivesithi yaseStanford eCalifornia. Ngokuthakazelisayo, kamva wabhala incwadi malunga nesihloko esithi "Lucifer effect". Kwimihlathi yam ndiye ndandibonisa ukuba imbali en mqondiso bonisa ukuba sisinye Luciferian simulation baphile (baqonde / badlale). Le nto ingaba yeso sizathu sokuba umfundi omtsha ayeke, kodwa ndiyakhuthaza ukuba ndiqhubeke nokufunda, kuba ndifuna ukubonisa indlela uluntu lwethu unempawu ezininzi esinokuzifumana kule Standford (/ Zimbardo) ejele. Ungafunda amanqaku phantsi kwezo ziqhagamshelwano kwakhona kamva.
Uvavanyo lweZimbardo lubonisa indlela abalindi beentolongo abangenayo baceba ngayo imithetho emininzi kunye neyomeleleyo kwimini embalwa ukuze benze izibophezelo ezikhohlisayo zithobele; ukulahlekelwa ngokupheleleyo ngumntu. Kulo vavanyo, bobabini amabanjwa kunye nabalindi babengabafundi abaye bahlolisiswa ngokomzimba nangokwengqondo ngaphambili. Isishwankathelo esingezantsi singenakuba yinkcazo ecacileyo yolu vavanyo, kodwa inika isishwankathelo esifanelekileyo. Kule nto Intetho yeVPRO Unokuva oko uFilipu uZimbardo ngokwakhe ekufuneka athi ngolu vavanyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba uZimbardo ngokwakhe wayekho ngexesha lovavanyo kwaye, njengabagcini ngokuzithandela, baqala ukubonakalisa ukuthambekela okudakisayo. Enyanisweni, ukuzama ukupheka kwinto yokuba xa iziboshwa ziziva ziphathwa ngokungafanelanga, abalindi beentolongo bazama ukwenza imisebenzi yabo "ngakumbi ngakumbi," ngokuthatha amanyathelo athile okunyanzelisa inkululeko, ukwenzela ukuba ukuphunyezwa ngempumelelo kwemisebenzi yabo kungathinteki. Ngosuku lwe-2, amabanjwa athobileyo aqala ukuvukela, ngenxa yokuba iimeko ezazisondela zaqala ukuba nefuthe ngokwengqondo. Nangona kunjalo, abagcini bobuqhetseba bathatha umsebenzi wabo ngokugqithiseleyo kwaye ngokukhawuleza belibalekile ukuba kwakuyilingo. Ngomhla wamibini, abalindi baqala ukutshiza abathinjwa abakhohlisayo ngokucima umlilo ukuze bahlale belawulwa baze bavale kwiibhobho ezazisetyenziselwe ukuma. Khangela ingqalelo kwisishwankathelo sovavanyo ngaphantsi.
Isizathu sokuba ndichaze lo mzamo kukuba ndikholelwa ukuba ukuthelekiswa kungenziwa kwinqanaba eluntwini elikhulu, apho singakwazi ukwahlula uluntu ngamaqela amabini:
Abadali, abaphumeleli nabahloli bemithetho ebonakala ngathi ijoliswe ukugcina izinto zihamba ngokufanelekileyo kuluntu, kodwa kwiimeko ezininzi zithathwa njengezithintelo inkululeko
Igumbi lokusebenza elimele lihambisane nemithetho nemimiselo kunye nokuhlawula irhafu
Oku kunokuba kunzima kakhulu ukuhlukanisa okanye kumnyama kunye nokumhlophe emehlweni akho, kodwa eqinisweni kukho abantu abaninzi abasebenza 'kwinkqubo' (iqela le1). Urhulumente uvela nemithetho nemithetho kwaye abantu abaninzi banokuhlela ukuqaliswa, ukuphunyezwa kunye nokubeka iliso kuloo mithetho nemithetho. Uza kuthi:Ewe, kodwa imithetho nemithetho kuyimfuneko ukuba ilizwe lisebenze ngokufanelekileyo kwaye alinakufaniswa nentolongo, ngokuba asihlali entolongweni". Emva koko ndiyakuthanda ukuxelela ukuba abagcini beengxowa-mali kwiZimbardo ukuvavanya nabo babengabakhathaleli amabanjwa abo kwaye bafumanisa ukuba baqikelele ukuba baqulunqa imithetho emininzi kwaye iminyanzelo (ukuze ilahlekelwe ngumntu). Oko kwathiwa, usenokufumanisa ukuba uluntu alukwazi ukuthelekiswa nentolongo, kodwa ke ndikubuza ukuba ngaba ukhangelelene nawe.
Bala inani leemoto kunye nophahla olugcwele iikhamera ozibona ukuhamba ngokujikeleza kwisixeko okanye idolophu yakho. Bala inani labahamba ngeekhamera ngasemva. Bala inani leekhamera ozibonayo zixhomekeke kwisitratato sesisetyenzisiweyo okanye kwindlela ehamba phambili. Bala inani le-BOAs, amagosa amapolisa kunye nabanye abahloli ababona ukuhamba okanye ukuqhuba ngemoto ngomhla we-1. Bala inani lee-arhente zokuqokelela, iiofisi zoncedo, iinkonzo zokuhlola, abahloli bamaspala, njl., Ngaphakathi kwimizila yeekhilomitha eziyi-25 ukusuka ekhaya. Bala inani labantu abasemgangathweni wakho osebenza "ekunyamekeleni" (njengokhathalelo lolutsha), ngokwenene lelo ziko apho abantwana bavalelwe khona kwaye bahlala bexhatshazwa (bona ukurekhodwa kwangaphantsi). Bala inani labantu abasendaweni yakho esondeleyo esisebenza kwinkathalo yezempilo yengqondo ("ukunakekelwa"), apho abantu bagcinwa kwiselenki, phantsi kweyeza kunye nokubonwa. Bonke aba bantu, njengabalindi beentolongo abavela kulo mvavanyo apha ngezantsi, bakufumanisa ngokusemthethweni oko bakufanele bayenze kwaye ngokukodwa bakhathalele ngokukhusela isikhundla sabo kunye nemali engenayo. Ngokuqhelekileyo batshatileyo kwaye banentsapho yabo. Mhlawumbi wena ngokwakho usele qela.
Abantu abaninzi abasebenzela kwicala labalindi, ngokuvisisana ngokubanzi kuya kubakho abantu baya kulondela umsebenzi womnye nomnye, isikhundla sakhe nokuziphatha kwakhe. Xa abantu bebeke ubuntu babo phezu kweebhodi ngenxa yokuba kufuneka benze umsebenzi wabo kwaye bavelele ukuziphatha komnye njengento evukelayo kwaye ecasulayo, ngokuqinisekileyo sibona ukuziphatha kwe-Stanford ukuzama kwiindawo ezininzi zoluntu. Ngaba uyazi ngokwakho kule nto?
Thatha isinyathelo emva kwaye uphinda uphinde ubume bakho kwaye ubeke imisebenzi yakho. Ngaloo ndlela kuphela le nto inokuthi iyancipha kwiindawo. Nangona ukuba ungumcebisi kwaye kufuneka ukhuphe iintsapho; nokuba ngaba u-BOA kuphela kwaye uvelise izaphulo zokupaka ngekhamera yakho yekhamera; nokuba ngaba ungumsebenzi wokunyamekela ulutsha kwaye uvale abantwana egumbini labo kuba "kulungile kubo"; Kwakhona ukuba unomntu okhuselekileyo kwikhaya lomhlalaphantsi kwaye ubeka umdala emva komnyango ngekhowudi yepini ngoba "baya kuthi bahambe khona"; nangona ungumqeshwa weGGZ kwaye uqhubeka udideka abantu kwisitokisi esinqununu kwaye uzalise ngamachiza ngenxa yokuba "baya kuhamba". Khangela uvavanyo lweZimbardo Stanford kwaye uqaphele kwakhona ukuba ukungcola kusenokubangelwa yinkqubo yemithetho kunye nemithetho yokuba into eninzi ayiphumelekanga kwaye idale intolongo engenamigoqo ebonakalayo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: lucifereffect.com
Umyalelo weNgqungquthela we-Schippers ukuvalelwa nabani na ongavumelani nombuso
'Uluntu olunjalo' lizwi elidumile likaSire, kodwa yintoni onokuyenza ngokwenene?
UPaul Jansen umhleli-ntloko u-Telegraaf: umlawuli wakho omtsha owenza i-TBS imithetho embi?
Abantu abaninzi baye basebenzela urhulumente, ukwenzela ukuba ukugxekwa kobuso kuphelile
tags: lokulinga, eziziimbalasane, entolongweni, GGZ, ulondolozo lolutsha, kuluntu, EStanford, Zimbardo
24 Juni 2019 kwi-14: 56
Amava am a bonisa ukuba abaninzi abantu abanakukhathalela malunga nabo bekunene phakathi kwabo baze baqonde ukuba izinto ezimbi ziphi. "Uya kuwubona kuphela xa uyibona" ​​isebenzela ininzi yabemi baseMadurodam, abano-antsy kodwa bengenako ukusibekela yonke into. Kungenxa yoko uMadurodam uya kuhlala ehlala encinci, ngokuxhomekeka kwiimpembelelo eziqhelekileyo zokulungisa yonke i-circus. Kuze kube yilapho i-adage yokuzimela "Emva kwam umkhukula" isebenza ...
24 Juni 2019 kwi-18: 01
hahaha idd ukuba ewe, ekhonkxwe kwaye elula phambi kweenqwelo, uhlala ekhangela amahhashi asebenzayo kunye nokunyusa kunye nabaqhubi bendoda eMadurodam.
28 Juni 2019 kwi-16: 15
Ukubukela i-Twitter esuka eJacolien kwaye ndiyabona ukuba uhlala ekhuluma nge 'jesus'. Kule rekhodi akukho bungqina bokuba ukhona namhlanje!
Kutheni i-propaganda 'yeJesus'? Yintoni enokubangela oku? Abafana besicatshulwa bafuna ukukhuthaza 'uYesu'? Ngaba ukuchaneka ngokuchanekileyo?
Ndifumanisa ukuba uJacolien ukhangelelwanise imithombo yeendaba kunye neefashishini ngokuphathelele udadewabo kunye nokubhala njengoko kuyinyaniso. Njengokuba unemenyu, inqubo, yindlela efika ngayo kum. Kwimeko yakhe andizange ndibavelele zonke ezo endaba. Oku kuphakamisa imibuzo.
28 Juni 2019 kwi-16: 41
Uyazi: AmaKristu akaze athethe amanga okanye athile nantoni na
28 Juni 2019 kwi-18: 52
Hayi, bahlala befihla phantsi kwe-denominator
"MaKristu." Ngokuqhelekileyo banemvelaphi eyahluke kakhulu, abayifihla kakuhle kwamanye amaKristu. Anditsho ukuba le nto yimeko kodwa kubonakala ngathi.
« Asikwazi ukusombulula iingxaki kwihlabathi ngokucinga nokuthetha, kodwa ngale ndlela:
U-Anja Schaap waseKatwijk ngoLwesihlanu ozayo "wangcwatyelwa" kwisangqa esivaliweyo »
Iindwendwe ezipheleleyo: 10.897.974
UMartin Vrijland op Ngaba u-Elon Musk unalo ubudlelwane nomntu we-transgender? Fundisisa umculo wale Grimes apha
guppy op Ngaba u-Elon Musk unalo ubudlelwane nomntu we-transgender? Fundisisa umculo wale Grimes apha
SandinG op Ngaba u-Elon Musk unalo ubudlelwane nomntu we-transgender? Fundisisa umculo wale Grimes apha
Mindsupply op Ngaba u-Elon Musk unalo ubudlelwane nomntu we-transgender? Fundisisa umculo wale Grimes apha